Ogaden News Agency (ONA) – Gariile & Hagos Sehay oo ku guuldareystay inay ka gadaan shirkada Worldcom barnaamijyo lagu xayaysiinayo KT Meles
Gariile & Hagos Sehay oo ku guuldareystay inay ka gadaan shirkada Worldcom barnaamijyo lagu xayaysiinayo KT Meles
Posted by ONA Admin	/ November 12, 2011
Warar xog-ogaal ah oy na soo gadhsiiyeen ilo-wareedyo muhiim ah ayaa naloogu sheegay inay fashilmeen waxyaaba badan oo qurba-joogta shucuubta Itobiya iyo jaaliyadahaOgadenya ee dibadda la doonayay in lagu marin habaabiyo.
Waxay wariyayaasha qarsoon ay soo tabinayaan in bil ka hor KT Melese uu qoomiyad kasta qurba-joogeeda ka soo xushay shaqsi u diyaariya baroobagaanda lagu amaanayo isaga oo aduun weynaha lagu qaldo oo waxqabad been ah loogu sheego inuu qawmiyadaa gaadhsiiyay intay xukunka haysteen Meles iyo qawmiyadiisa Tigreega.
Abaabulka howshan ayaa waxaa loo xilsaartay siduu noo soo tabiyey wariyahan qarsoon calooshii-u-shaqayste Cabdillahi Gariile & nin Tigree ah oo layidhaah Hagos Sehay, oo reer New York ah. Labadan nin ayaa waxaa haysata dhibaata weyn ka dib markii ay lacaga farabadan oo loogu talagalay arimahaa lunsadeen iyadoo wax natiija ah ay ka keeni la’yihiin qurxintii Meles ee loo xilsaaray.
Wariyaha oo warbixintiisii sii wata ayaa yidhi; “War iyo murtidii beentii la dhoodhoobay waxaa la doonayey shirkada Worldcom Public Relations inay u sameyso iidheh iyo muuqaal uusan Melese laheyn, hasa ahaatee waxay diiday habkay wax u wadeen.”
KT Meles Zinawi oo maalmahan shirarka tagi kari la’ ceeb darteed iyo su’aalo laga weydiinayo waxa ka socda dalkiisa, ayaa wuxuu hanti badan u huray in dib loo dhiso muuqaalkiisa, taasoo uu kala tashaday shirkada badan oo arimahaa baac ku leh.
Shirkadani WPR ee fadhigeedu yahay Washington ayaa diiday iidhehdan waxeyna si toos ah ugu sheegtay in aanay aduun weynaha ka gadmaynin waxyaabaha ay soo dhoodhoobeen oo waxyaaba kale ula yimaadaan.
Arintan ayuu wariyahan qarsoon ee noo soo tabiyaya xogtan noogu sheegay in warar hoosoo uu helayo loogu sheegay inay waji gabax weyn iyo filanwaa ku noqotay Melese iyo daba-dhilifyadii ka shaqaynayay xayaysiiskaa, waxaana lagu waramayaa inay Washington ka dhexraadinayaan hadda shirkad kale oo muuqaal uunan laheyn iyo iidheh u sameysa KT Melese.
Wixii ka soo kordha waan idinla socodsiin doonaa.